Madaxweynaha Kenya iyo Ku xigeenkiisa oo xilka loo dhaariyay
Home WARARKA Madaxweynaha Kenya iyo Ku xigeenkiisa oo xilka loo dhaariyay
Nairobo(Berberanews):- Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Kenya ee doorashadii Ku-celiska ahayd ee Kenya ka dhacday 26-ka bishii hore Uhuru Kenyatta iyo William Ruto, ayaa maanta loo kala dhaariyay Xilalka, isla markaana lagu caleemo-saaray magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya oo ay Munaasibadda Caleemo-saarkooda kala qaybgaleen Madax kala duwan oo Dalalka Dunida ka kala socday.
Dad Boqol Kun oo Ruux ku dhow, ayaa ka qeybgalay Xafladda Caleemo-saarka Madaxweynaha Kenya iyo Ku-xigeenkiisa, taas oo ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Kasarani oo qaada 60 kun, halka 40 kun kale ay dhalooyin Bannaanka la sudhay ka daawanayeen. Illaa 20 Madaxda Adduunka ah, ayaa kasoo qeybgalay Caleemo-saarka.
Ciidammada Kenya ee kala duwan ayaa gaado ka ciyaar kusoo bandhigay goobta. Madaxweyne Kenyatta ayaa waxaa dhaariyay xaakimka sare David Maraga oo ahaa xaakimkii laalay natiijada doorashadii dhacday 8-dii bishii Agoosto.
Previous articleMaxkamadda Sare ee Somaliland oo Komishanka ku ayiday Natiijadii hordhaca ahayd ee Doorashada Madaxtooyada
Next articleKalluumaysatada Berbera oo cabasho ka muujiyay dhul-boob ay ku sammaysay xukuumadda xilkeedu dhammaaday